Ukuphumelelisa ukusebenza okuhamba phambili - umsebenzi we nomqondisi wanoma iyiphi inkampani. Ukunciphisa izindleko futhi iqhakambisa ukukhiqizwa, izinkampani eziningi ziwulalelisise Outsourcing. Njengoba wazi, engcono kakhulu yokuthola lokho senza konke okusemandleni. Lena imfihlo eyinhloko ukusebenza Outsourcing: inkampani iklayenti ukwenza imisebenzi yabo, futhi autsorer inkampani - neprofililnymi inkinga amakhasimende.
"Outsourcing" kusho ngokunikezwa zekhompyutha amaseva kwenye inkampani. Ukuze izinkampani ezinkulu - okusho ukuthi ingxenye sevisi idluliselwe enye inkampani, kanye izinkampani ezincane kanye naphakathi can ngisho Ukuyekwa ephelele siqu umnyango wakho we-IT. Ngakho, akudingeki esigcwele professional - ukuhlela indawo ukuba akhokhe izintela, iholide pay - futhi ikhwalithi yamasevisi ukuhlinzeka ngosizo lwama-computer iyakhula. Kukhululwa imithombo futhi akhulule induna ikhanda izixazululo imisebenzi non-core, inkampani iqala ukusebenza kangcono.
Nokho-ke, ukuncipha izindleko kubasebenzi - iyona kuwukusika elijikayo. ezithakazelisayo Okuningi ukubheka IT Outsourcing IT nokwenza ingqalasizinda. Phela, izinkampani PC yesondlo ukukhiqiza ochwepheshe ongakhethi, okuyiwona msebenzi ngempumelelo - into ebaluleke kakhulu. Okubaluleke kakhulu, mhlawumbe, kuphela inkampani is hhayi unqamule inkontileka nabo, futhi isisusa enkulu ukunikeza isevisi enhle kakhulu, usethe inethiwekhi, amakhompyutha kanye amaseva for ukusebenza esiphezulu.
Nakuba lo mqondo libonakala lilula, ku Outsourcing IT it has izimfihlo zayo siqu.
Umkhawulo: Umkhawulo kanye angenamkhawulo service bizo.
Ukukhipha kusho amakhompyutha subscription service. Inani yesevisi incike isibalo amakhompyutha kanye nenani eyabonisa eziphuthumayo nokuvakasha okuhleliwe. Ezinye izinkampani ukuhlola izindleko lena akuyona "by iso" wenziwa IT kwamabhuku. Isibalo sokugcina kuyavumelana inkontileka. Nokho, ezinye izinkampani azikuncishi amaklayenti abo nohlaka enjalo, futhi inikeza esingenamkhawulo ukuthi uhambo. Kuyaqondakala ukuthi samuntu encomekayo ezinjalo.
Abasebenzi Uchwepheshe iyaphendula kweso. Kodwa uma inkampani is a multi-legatsha, ngisho lokhu inzuzo phambi manje-autsorsirom wakhe hhayi. Nakuba zonke izinkampani athembisa yesivinini yinhlamvu, eqinisweni, kudingeka zilinde isikhathi eside kakhulu. Qiniseka ukuthi usunesivumelwano lelipelwe isikhathi kahle ngawe ukusabela esicelweni. Abanye imisebenzi, Nokho, inkampani enhle bese unquma iqiniso kweso - ukuphatha kwamarimothi ngoba akekho ukhansele.
Wena etandleni enye inkampani, futhi aveze kuwe umbiko umsebenzi noma nini. Futhi umbiko ukuphathwa kumele kube sobala kuwe nodondolo lwakho. Lokhu kungaba icebo kwezakhiwo IT, amarekhodi ngokucophelela umsebenzi owawenziwa. Hlola inkampani ilula - mcele afeze IT-audit. Iningi lezinkampani mahhala ukubambelela kanye show embikweni wakhe.
Qiniseka ukuhlola nenkampani Outsourcing zonke izinhlobo zomsebenzi usuzosebenzisa babanike. Okubalulekile ngawe ukuba baqonde kahle ngokuzibuza: inkampani vutsorsingovaya angenalungelo lokukuthola ukugxambukela nakwezinye izici izinkampani ekuphileni. Futhi uma, isibonelo, awuzange umnike lelo lungelo ukusebenza leseva sakho 1c, ngeke sisebenze, noma ukwenza isenzo ahlukene lomsebenzi, futhi lokhu imali eyengeziwe.
Qiniseka ukuthi abantu abalungile abasebenzela inkampani. Akubalulekile ukusebenza inkampani ngokuphelele akhiwa abafundi. Njengomthetho, isipiliyoni sabo ngeke ukuxazulula izinkinga zakho masinya. Vumela isevisi ngeke ukhokhe kancane ezibizayo, kodwa wena isu lobuciko uyosibonisa.
Okuhle umsebenzi autsosing ku pre-emption.
Outsourcing ngokuvamile imperceptible. Leli akulona uphawu okubi, futhi umsebenzi omuhle. Uma inkampani ngokucacile futhi ngaphandle ukuphazamiseka - okusho ukuthi ukhokha nabantu abalungile.